Vakio tsara ireo teny sy fepetra ireo. Ity fepetra sy fepetra ity dia mifandraika amin'ny fampiasana ny votoatin'ny LifeBogger. Tsara ny manamarika fa tsy mamela ny fampiasana ny fehezan-tsika RSS amin'ny tranonkala ahafahana mamorona votoaty.
Ny fidiranao sy ny fampiasana ny votoatin'ny tranonkala dia voafehin'ny fankatoavanao sy ny fanarahanao ireo fepetra ireo. Ireo fepetra ireo dia mihatra amin'ny mpitsidika rehetra.
Amin'ny fidirana amin'ny tranonkala, dia manaiky ny hampifanaraka ireo fepetra ireo ianao.
Ny tolotrasa azonay dia mety ahitana rohy mankany amin'ireo tranonkala na serivisy hafa izay tsy tompon'ny orinasa LifeBogger.
LifeBogger tsy manam-pahefana, ary tsy mandray andraikitra amin'ny, ny votoatiny, ny politika momba ny tsiambaratelo, na ny fomba fanaon'ireo tranonkala na serivisy hafa. Miaiky sy manaiky ianao fa ny LifeBogger dia tsy tompon'andraikitra na tompon'andraikitra, mivantana na tsy mivantana, noho ny fahasimbana na ny fahaverezan'ny voina na lazaina ho vokatry ny fampiasana na fiankinan-doha amin'ny votoaty na entana na serivisy toy izany hita na amin'ny alalan'ny izay tranonkala na serivisy tahaka izany.
Manoro hevitra mafy anao izahay hamaky ny fepetra sy ny fepetra momba ny fiainana manokana momba ny tranokala hafa na serivisy misy anao.
Azontsika atao ny mamarana na manajanona ny fidirana amin'ny serivisy avy hatrany, tsy misy fampandrenesana na andraikitra mialoha, na inona na inona antony, na dia tsy voafetra aza raha mandika ny fepetra.
Ny fepetra voalazan'ny Fehezandalàna mifandraika amin'ny natiora dia tokony ho tafavoaka velona amin'ny fivalozana, anisan'izany ny tsy fisian'ny famerana, ny fepetra momba ny fananana, ny fanomezan-dàlana hanefana, ny fahazoan-dàlana ary ny fetran'ny tompon'andraikitra.
Ireo fepetra ireo dia hifehezana sy hanoratana mifanaraka amin'ny lalàn'i Nizeria, tsy misy ifandraisany amin'ny volavolan-dalàna momba ny lalàna.
Ny tsy fahombiazantsika hampihatra ny zo na ny fepetran'ity Fehezandalàna ity dia tsy ho raisina ho toy ny fandàvana ireo zo ireo. Raha misy fepetra momba ireo fepetra ireo dia aseho ho tsy manan-kery na tsy misy fepetra avy amin'ny fitsarana, dia mbola hitohy ny fepetra sisa tavela amin'ity fepetra ity. Ireo fepetra ireo dia ny fifanarahana rehetra misy eo amintsika momba ny Service, ary manolo sy manolo ny fifanarahana rehetra izay mety ananantsika eo amin'ny serivisy.
Miaro ny zo izahay, amin'ny fisainanay irery ihany, hanova na hanolo ity fepetra ity amin'ny fotoana rehetra. Raha misy fanitsiana dia fitaovana hanandramantsika andro vitsivitsy farafaharatsiny 30 andro mialoha ireo fehezan-teny vaovao manomboka. Ny fanovana ara-materialy dia ho voafaritra amin'ny fisainantsika irery.
Amin'ny fahazoana miditra na mampiasa ny tolotrasa aorian'ny ahafahan'ireo fanavaozam-baovao mahomby, dia manaiky ny hampifanaraka ny fepetra navaozina ianao. Raha tsy manaiky ny fe-potoana vaovao ianao dia atsaharo ny fampiasana ny serivisy.
Raha manana fanontaniana momba ireo fepetra ireo ianao dia manorata aminay amin'ny lifebogger@gmail.com